Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay dhismaha xarun ay qarxiyeen Al-Shabaab +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay dhismaha xarun ay qarxiyeen Al-Shabaab +(SAWIRRO)
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay dhismaha xarun ay qarxiyeen Al-Shabaab +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta oo Arbaco ah waxaa uu dhagax dhigay dhismaha xarunta degmada Warta Nabada oo horey Al-Shabaab qarax ku bur buriyeen.
Guddooomiye Cumar Filish ayaa sheegay in dib u dhis ballaaran lagu sameyn doono Xarunta Degmada, si loo dardargeliyo adeega shacabka ku nool Degmada Warta Nabadda ,isaga oo baaq u diray Shacabka ku nool Caasimadda in ay kaalin weyn ka qaataan horumarinta Caasimadda, Amniga iyo isdhexgalka bulshada .
14kii Bishii May sanadkii 2019 ayeey Shabaab Qarxiyeen Xarunta Maamulka Degmada Warta Nabadda, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen shaqaalaha qaar, kuwana ay ku dhinteen.
Todobo bilood kadib waxaa suuragashay in maanta la dhagax dhigo dhismaha Xarunta Degmada Warta Nabadda si dib loogu hagaajiyo.
Ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay qarxiyeen xarumaha Degmooyink Hodan iyo Hawlwadaag, inkastoo Xarunta Degmada Hodan dib loo dhisay, xarigana laga jaray.
dhisme ay Shabaab burburiyeen
Duqa Muqdisho Cumar Filish
guddoomiyaha gobolka Banaadir